Mareykanka oo Saraakiil Al-Shabaab ah ku daray Liiska Argagixisada – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2020 7:40 b 0
Dowladda Mareykanka ayaa labo sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab ku dartay Liiska Argagixisada Caalamiga, kaddib qoraal ka soo baxay Xoghayaha Wasaarada Arrimaha Dibadda Michael Pompeo.
Labada Sarkaal ee Liiska Argagixisada caalamiga lagu daray ayaa kala ah C/llaahi Cusmaan Maxamed oo loo yaqaano Engineer Ismaaciil iyo Macalin Ayman oo magaciisa yahay C/casiis Dhubow.
C/llaahi Cusmaan ayaa ah Khabiir dhanka Qaraxyada ahna Madaxa Qaraxyada Al-Shabaab, sidoo kalena ah La Taliyaha gaarka Hoggaamiyaha Al-Shabaab iyo Madaxa Warbaahinta Al-Shabaab.
Ninka labaad oo ah Macalin Ayman ayaa hoggaamiya Guutada Ayman, waxaana ay ka howlgalaan Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasoo qaada weerarada culus ee ka dhaca Soomaaliya iyo Kenya.
Macalin Ayman ayaa ka mas’uul ahaa weerarkii cuslaa ee lagu qaaday Saldhiga Mareykanka ee Manda Bay ee dalka Kenya bishii Janaayo 2020.
Xubnahan ayaa tagi karin Mareykanka, sidoo kale lala wareegayo hantidooda, waxaana isha lagu heyn doonaa dhaq dhaqaaqyadooda, sidoo kale hey’adaha dambi baarista ayaa tallaabooyin dheeraad ah ka qaadi doona, sida in madaxooda lacago la dulsaaro.
Mareykanka ayaa sanadkii 2008 Liiska Argagixisada ku daray Ururka Al-Shabaab, iyadoo Al-Shabaab sanadkii 2012 ku biirtay Ururweynaja Al-Qaacida.
Hay’adaha Dib-u-eegista Dastuurka oo kulan la yeeshay Madaxweynaha Hirshabelle iyo Xukuumaddiisa
Wararkii ugu dambeyeey ee dagaalka Itoobiya & RW Abiy oo Digniin kama dambeys ah soo saaray